အရှေ့အရပ်နဲ့ တောင်အရပ်ကိုသာ ခေါင်းပြု အိပ်ရခြင်းအကြောင်းရင်း - POPPIN NEW
July 11, 2019 ဗဟုသုတ
ဘာကြောင့် အ ရှေ့အရပ်နဲ့ တောင်အရပ်ကို ခေါင်းပြုပြီး အိပ်သင့်တာလဲ?
ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်က အရှေ့ဘက်နဲ့ တောင်ဘက်ကို ခေါင်းပြုပြီး အိပ်ရ တာ ကို ဘာသာရေး အရ ၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာ အရ အိပ်ရတယ် လို့ပဲ ထင်ခဲ့တယ် ။
တကယ်တော့ အရှေ့ရပ် နဲ့ တောင် အရပ်ကို ခေါင်း ပြု ပြီး အိပ်တယ် ဆိုတာ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ကောင်းကျိုး တွေ ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကို သိခဲ့တဲ့ ပညာရှိ ရှေးလူကြီးတွေက လက်ဆင့်ကမ်း မှာကြားလာတာ က နေ ဘာသာရေးလိုလို ၊ ဓလေ့ ထုံးတမ်း လိုလို ဖြစ်လာ ခဲ့မယ် လို့ ထင်မိပါတယ်။
သိပ္ပံနည်း အရပဲ ပြောပြော ၊ ဘာသာရေး အရပဲ ပြောပြော အ ရှေ့ အရပ် နဲ့ တောင် အရပ်ကို ခေါင်းပြု အိပ်ခြင်းက ကောင်းကျိုးတွေ အများကြီး ဖြစ်စေပါတယ်။
အရှေ့နဲ့ တောင်အရပ်ကို ခေါင်းပြုအိပ်ခြင်းရဲ့ သိပ္ပံနည်းအရ ကောင်းကျိုးများ
(၁)။ လူသားတွေမှာလည်း သံလိုက် စက်ကွင်းရှိပါတယ်။ ဦးခေါင်းပိုင်းက အဖိုဓာတ်ရှိပြီး ခြေရင်းပိုင်းက အမဓာတ်ရှိပါတယ်။ မြောက်အရပ်ကို ခေါင်းပြုအိပ်ရင် အဖိုဓာတ်တူတာခြင်း တွန်းကန်ပြီး ခေါင်းကိုက်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
တောင်ဘက်ကို ခေါင်းပြုအိပ်ရင်တော့ ဓာတ်မတူတာကြောင့် ဆွဲငင်အားဖြစ်ပေါ်ပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးဖြစ်စေပါတယ်။
(၂)။ ကမ္ဘာက အ နောက်ကနေ အရှေ့ ကို လည်ပတ် နေတာကြောင့် နေရဲ့ သံလိုက်စက်ကွင်းက အရှေ့ဘက် ကလာပြီး အနောက် ဘက်ကို ရွေ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အ ရှေ့ဘက်ကို ခေါင်းပြု အိပ်တဲ့ အခါ နေရဲ့ စွမ်းအင်တွေက ဦး ခေါင်းဘက် က နေ ဝင်လာပြီး ခြေ ထောက် တွေမှာ တည်ရှိနေတတ်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ခေါင်းအေးတဲ့ အပြင် ခန္ဓာကိုယ်ကအပူတွေက ခြေ ထောက် က နေထွက်သွားပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းစေ ပါတယ် ။ အနောက်ဘက် ကို ခေါင်း ပြုအိပ်ရင်တော့ အပူ အအေး ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီး ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေပါတယ်။
(၃)။ နောက်ထပ် သုတေသန တစ်ခုအရ အ ရှေ့ဘက်နဲ့ တောင်ဘက်ကို ခေါင်းပြုအိပ်သူတွေက REM sleep ပိုတိုးလာပြီး နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်စေနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါတင် မက သေးပါဘူး၊ အိပ်ချိန်လည်း ပုံမှန်ဖြစ်စေပါတယ်။
(၄)။ အ ရှေ့ဘက်နဲ့ တောင်ဘက်ကို ခေါင်းပြုအိပ်ရင် သွေးလည်ပတ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး ဦးနှောက်သွေးကြော မျှင်လေးတွေကို ကောင်းကျိုးဖြစ်စေပါတယ်။
(၅)။ စိတ်ဖိစီးစရာ အလုပ်တွေ လုပ်ရသူအဖို့တော့ တောင် ဘက်ကို ခေါင်းပြု အိပ်ရင် ဦးနှောက် နဲ့ စိတ် ကို ပေါ့ပါးစေပြီး ကြည်လင်စေပါတယ်။
(၆)။ မြောက်ဘက်နဲ့ အ နောက်ဘက်ကို ခေါင်းပြုပြီးအိပ်ရင် သွေးလည်ပတ်မှုကို အ နှောင့်အယှက် ဖြစ် စေ ပြီး အိပ် မ ပျော် တာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
(၇)။ မြောက်ဘက်နဲ့ အ နောက်ဘက်ကို ခေါင်းပြုပြီးအိပ်ရင် တွန်းကန်အားတွေကြောင့် စိတ်စွမ်းအင်ကို လျော့ ကျစေပါတယ်။ လုပ်သမျှ မဖြစ်တာ၊ ထင်ထားသလို ဖြစ်မလာတာတွေပေါ့။ ဒါတွေကို ဘုန်းနိမ့်တယ်လို့ လူကြီးတွေပြောကြတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
(၈)။ မြောက်ဘက်ကို ခေါင်းပြုအိပ်ရင် အမဓာတ် (negative) ဓာတ်များပြီး ဦးနှောက်ထဲကို အဆိုးမြင် အတွေးတွေ လွှမ်းမိုးတတ်ပါတယ်။
တောင်ဘက်ကို ခေါင်းပြုအိပ်ရင်တော့ အဖိုဓာတ် (positive) ဓာတ်များပြီး ဦးနှောက်ထဲကို အ ကောင်းမြင် အ တွေးတွေ လွှမ်းမိုးတတ်ပါတယ်။ ဦးနှောင်လုပ်ဆောင်မှုကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လူကြီးတွေက အ ရှေ့နဲ့ တောင်ဘက်ကိုပဲ ခေါင်းပြုအိပ်ဖို့ပြောတာပေါ့။
SayarMyo -ကျန်းမာရေးအသိ မျှဝေသည်
အရှအေ့ရပျနဲ့ တောငျအရပျကိုသာ ခေါငျးပွု အိပျရခွငျးအကွောငျးရငျး
ဘာကွောငျ့ အ ရှအေ့ရပျနဲ့ တောငျအရပျကို ခေါငျးပွုပွီး အိပျသငျ့တာလဲ?
ကြှနျမတို့ ငယျငယျက အရှဘေ့ကျနဲ့ တောငျဘကျကို ခေါငျးပွုပွီး အိပျရ တာ ကို ဘာသာရေး အရ ၊ ထုံးတမျးစဉျလာ အရ အိပျရတယျ လို့ပဲ ထငျခဲ့တယျ ။
တကယျတော့ အရှရေ့ပျ နဲ့ တောငျ အရပျကို ခေါငျး ပွု ပွီး အိပျတယျ ဆိုတာ စိတျရော ကိုယျပါ ကောငျးကြိုး တှေ ပေးနိုငျပါတယျ။
ဒါကို သိခဲ့တဲ့ ပညာရှိ ရှေးလူကွီးတှကေ လကျဆငျ့ကမျး မှာကွားလာတာ က နေ ဘာသာရေးလိုလို ၊ ဓလေ့ ထုံးတမျး လိုလို ဖွဈလာ ခဲ့မယျ လို့ ထငျမိပါတယျ။
သိပ်ပံနညျး အရပဲ ပွောပွော ၊ ဘာသာရေး အရပဲ ပွောပွော အ ရှေ့ အရပျ နဲ့ တောငျ အရပျကို ခေါငျးပွု အိပျခွငျးက ကောငျးကြိုးတှေ အမြားကွီး ဖွဈစပေါတယျ။
အရှနေဲ့ တောငျအရပျကို ခေါငျးပွုအိပျခွငျးရဲ့ သိပ်ပံနညျးအရ ကောငျးကြိုးမြား
(၁)။ လူသားတှမှောလညျး သံလိုကျ စကျကှငျးရှိပါတယျ။ ဦးခေါငျးပိုငျးက အဖိုဓာတျရှိပွီး ခွရေငျးပိုငျးက အမဓာတျရှိပါတယျ။ မွောကျအရပျကို ခေါငျးပွုအိပျရငျ အဖိုဓာတျတူတာခွငျး တှနျးကနျပွီး ခေါငျးကိုကျတာတှဖွေဈတတျပါတယျ။
တောငျဘကျကို ခေါငျးပွုအိပျရငျတော့ ဓာတျမတူတာကွောငျ့ ဆှဲငငျအားဖွဈပျေါပွီး ကနျြးမာရေးကောငျးကြိုးဖွဈစပေါတယျ။
(၂)။ ကမ်ဘာက အ နောကျကနေ အရှေ့ ကို လညျပတျ နတောကွောငျ့ နရေဲ့ သံလိုကျစကျကှငျးက အရှဘေ့ကျ ကလာပွီး အနောကျ ဘကျကို ရှပေ့ါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အ ရှဘေ့ကျကို ခေါငျးပွု အိပျတဲ့ အခါ နရေဲ့ စှမျးအငျတှကေ ဦး ခေါငျးဘကျ က နေ ဝငျလာပွီး ခွေ ထောကျ တှမှော တညျရှိနတေတျပါတယျ။
အဲဒီတော့ ခေါငျးအေးတဲ့ အပွငျ ခန်ဓာကိုယျကအပူတှကေ ခွေ ထောကျ က နထှေကျသှားပွီး ကနျြးမာရေးကောငျးစေ ပါတယျ ။ အနောကျဘကျ ကို ခေါငျး ပွုအိပျရငျတော့ အပူ အအေး ပွောငျးပွနျဖွဈသှားပွီး ကနျြးမာရေးထိခိုကျစပေါတယျ။
(၃)။ နောကျထပျ သုတသေန တဈခုအရ အ ရှဘေ့ကျနဲ့ တောငျဘကျကို ခေါငျးပွုအိပျသူတှကေ REM sleep ပိုတိုးလာပွီး နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျအိပျပြျောစနေိုငျတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒါတငျ မက သေးပါဘူး၊ အိပျခြိနျလညျး ပုံမှနျဖွဈစပေါတယျ။
(၄)။ အ ရှဘေ့ကျနဲ့ တောငျဘကျကို ခေါငျးပွုအိပျရငျ သှေးလညျပတျမှုကို ပိုမိုကောငျးမှနျစပွေီး ဦးနှောကျသှေးကွော မြှငျလေးတှကေို ကောငျးကြိုးဖွဈစပေါတယျ။
(၅)။ စိတျဖိစီးစရာ အလုပျတှေ လုပျရသူအဖို့တော့ တောငျ ဘကျကို ခေါငျးပွု အိပျရငျ ဦးနှောကျ နဲ့ စိတျ ကို ပေါ့ပါးစပွေီး ကွညျလငျစပေါတယျ။
(၆)။ မွောကျဘကျနဲ့ အ နောကျဘကျကို ခေါငျးပွုပွီးအိပျရငျ သှေးလညျပတျမှုကို အ နှောငျ့အယှကျ ဖွဈ စေ ပွီး အိပျ မ ပြျော တာတှဖွေဈစနေိုငျပါတယျ။
(၇)။ မွောကျဘကျနဲ့ အ နောကျဘကျကို ခေါငျးပွုပွီးအိပျရငျ တှနျးကနျအားတှကွေောငျ့ စိတျစှမျးအငျကို လြော့ ကစြပေါတယျ။ လုပျသမြှ မဖွဈတာ၊ ထငျထားသလို ဖွဈမလာတာတှပေေါ့။ ဒါတှကေို ဘုနျးနိမျ့တယျလို့ လူကွီးတှပွေောကွတာဖွဈနိုငျပါတယျ။
(၈)။ မွောကျဘကျကို ခေါငျးပွုအိပျရငျ အမဓာတျ (negative) ဓာတျမြားပွီး ဦးနှောကျထဲကို အဆိုးမွငျ အတှေးတှေ လှမျးမိုးတတျပါတယျ။
တောငျဘကျကို ခေါငျးပွုအိပျရငျတော့ အဖိုဓာတျ (positive) ဓာတျမြားပွီး ဦးနှောကျထဲကို အ ကောငျးမွငျ အ တှေးတှေ လှမျးမိုးတတျပါတယျ။ ဦးနှောငျလုပျဆောငျမှုကိုလညျး ပိုမိုကောငျးမှနျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ လူကွီးတှကေ အ ရှနေဲ့ တောငျဘကျကိုပဲ ခေါငျးပွုအိပျဖို့ပွောတာပေါ့။
SayarMyo -ကနျြးမာရေးအသိ မြှဝသေညျ
Pop Pin New December 2, 2018
Pop Pin New May 10, 2019
ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်ကို လိပ်ခန္ဓာ ကြက်တူရွေပါးစပ်၊ မိချောင်းအမြီး အင်္ဂါသုံးမျိုးပါ လိပ်တကောင်လာရောက်ဖူးမျှော်
Pop Pin New June 16, 2019
ကန္တာရထဲက စိန်တွင်းကြီး တွေ့ရင် မဆင်းကြနဲ့ ပြောလည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူး
Pop Pin New October 30, 2018